လူတွေဘာကြောင့် သတ်သေကြတာလဲ။ - Hello Sayarwon
လူတစ်ယောက်ဟာ အကြောင်းအရာ အသေးအဖွဲလေးကြောင့်နဲ့တော့ ကိုယ့်အသက်ကိုကိုယ် ရန်ရှာ အဆုံးစီရင်တာမျိုး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် အနီးဝန်းကျင်မှာ လူတစ်ယောက် သတ်သေသွားတဲ့အခါ ပိုက်ဆံလေး ၃ သောင်းလောက်ကို ပြန်မပေးနိုင်လို့၊ ရည်းစားနဲ့ ပြတ်လို့၊ မိဘက ဆူလို့ဆိုတာတွေကိုကြားရင် ဘာမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးနဲ့ သတ်သေကြတယ် ကိုယ့်အသက်ကိုယ် မနှောမြောဘူးလားလို့ ပြောစရာရှိနိုင်ပါတယ်။
တကယ်ကတော့ လူတစ်ယောက်ဟာ အလွယ်တကူနဲ့တော့ ကိုယ့်အသက်ကိုယ် ရန်မရှာကြပါဘူး။ လူဆိုတာက သေမှာ ကြောက်တဲ့ အမျိုးပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ သေမှာ မကြောက်ပါဘူးပြောပြော လူဆိုရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ရှင်သန်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိသလို ထိခိုက်နာကျင်ရမှာကို စိုးထိတ်ကြသူချည်းပါပဲ။ ဒီတော့ လူတစ်ယောက် သူ့ကိုယ်သူ အဆုံးစီရင်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို အတူတူ လေ့လာရအောင်လား………….
လူတစ်ယောက် ကိုယ့်အသက်ကိုယ် ရန်ရှာရခြင်း အကြောင်းအရင်း
လူတစ်ယောက် ကိုယ့်အသက်ကိုယ် ရန်ရှာခြင်း အကြောင်းတရားက တစ်ခုမကပါဘူး။
စိတ်ကျန်းမာရေး ပြဿနာ ရှိတာ
လူတော်တော်များများက သေကြောင်းကြံစည်ဖို့ကို အချိန်ယူပြီး စဉ်းစားကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခဏတာအတွင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး မျက်စိတမှိတ် လျှပ်တပြက်မှာ လုပ်လိုက်ကြတာ များပါတယ်။
သေကြောင်းကြံ​တာကို အများဆုံးဖြစ်စေတဲ့ ပြဿနာက စိတ်ဓာတ်ကျတာပါ။ စိတ်ဓာတ်ကျတာဆိုပေမယ့် တော်ရုံ စိတ်ဓာတ်ကျရုံနဲ့ လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်အသက်ကိုယ် ရန်မရှာပါဘူး။ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့နေရာမှာတောင် အဆိုးရွားဆုံး အဆင့်ကိုရောက်မှသာ ရှင်သန်ဖို့ အဓိပ္ပာယ်မဲ့နေပြီဆိုတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အဆုံးစီရင် ကြတာပါ။ ဒီလို အဆုံးစီရင်ခြင်းက သူ့ကို သက်သာရာရစေမယ်လို့ ထင်တာကြောင့်လည်း ပါတာပေါ့။
လူတစ်ယောက် သေကြောင်းကြံတယ်ဆိုတာ ငယ်စဉ်က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံခဲ့ရတာ၊ အနိုင်ကျင့်စော်ကားခံရတာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်ခံရတာ၊ စစ်ပွဲတွေကြားမှာ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာလိုမျိုး ဆိုးရွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတာကြောင့် အရိပ်မည်းကြီး တစ်ခုလို ခြောက်လှန့်ခံရရင်းက အလွန်အမင်း စိတ်ဖိစီးပြီး သေကြောင်းကြံကြတာပါ။
ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ မြင်ဖူးတယ်ဟုတ်။ စစ်မြေပြင်မှာ အနားယူခွင့်ပေးပါ ဗိုလ်ကြီးလို့ ခွင့်တောင်းရင်း ကိုယ့်နားထင်ကိုယ် သေနတ်နဲ့ တေ့ပစ်ပြီး အဆုံးစီရင်ကြတာမျိုးပေါ့။ အရမ်းစိတ်ကျဉ်းကျပ်ရတဲ့ အခြေအနေ၊ အလွန်အမင်း စိတ်ဖိစီး ခံစားရတဲ့ အခြေအနေမှာလည်း လူတစ်ယောက်က သေကြောင်းကြံတာကသာ လွတ်မြောက်ရာ ထွက်ပေါက်လို့ ယူဆတတ်ကြပါတယ်။
လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာ ဒါမှမဟုတ် ဆုံးရှုံးရမှာကို ကြောက်တာ
လူတစ်ယောက်ဟာ ပညာရေးမှာ ဆုံးရှုံးတာ၊ တာဝန်ကနေ အနားပေးခံရတာ၊ ထောင်ချအပြစ်ပေးခံရတာ၊ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျ ခံရတာ၊ အရှက်ခွဲခံရတာ၊ ငွေကြေးအကျပ်အတည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတာ၊ မိတ်ဆွေတစ်ဦးဦးနဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်တာ၊ ချစ်သူ၊အိမ်ထောင်ဖက်က လမ်းခွဲထားရစ်ခဲ့တာ၊ အလုပ် အရှုံးပေါ်သွားတာ၊ ချစ်ခင်ရသူ တစ်ဦးဦး ဆုံးပါးသွားတာ၊ အခြေအနေ တစ်ရပ်ရပ် နိမ့်ပါးသွားတဲ့ အခါမျိုးမှာ ဆုံးရှုံးမှုဒဏ်ကို မခံနိုင်တာကြောင့် ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆုံးရှုံးရမှာကို စိုးထိတ်လို့ပဲ​ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ကြပါသတဲ့။
အနုပညာရှင်တွေ အသစ်သစ်တွေကို မဖန်တီးနိုင်လောက်တော့ဘူးလို့ ယူဆတဲ့အခါ အောင်မြင်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ကြုံရတဲ့အခါ အဆုံးစီရင်ကြတယ်ဆိုတာ ဆုံးရှုံးတာကို ခံစားရလို့နဲ့ ဆုံးရှုံးရမှာကို ကြောက်တဲ့ စိတ်ကြောင့်ပါပဲ။
နာတာရှည် ရောဂါ တစ်ခုခုကို ခံစားရတဲ့အခါမျိုး
ကိုယ့်ရဲ့ ရှင်သန်မှုက အခြားသူအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်နေပြီလို့ ထင်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်တတ်ကြပါသေးတယ်။
လူတစ်ယောက် ဖြစ်တည်ဖို့ မလွယ်ကူသလို ရှင်သန်နေတဲ့ဘဝကို စွန့်လွှတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ဖို့ဆိုတာကလည်း လွယ်ကူလှတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မဟုတ်ပါဘူး။ သက်ရှိတိုင်းက ရှင်သန်ချင်ကြပါတယ်။ မတတ်သာလို့သာ အဆုံးစီရင်မှုကို ထွက်ပေါက် တစ်ခုအဖြစ် ရွေးချယ်ကြရတာပါ။
Why Do People Commit Suicide? https://www.verywellmind.com/why-do-people-commit-suicide-1067515 Accessed Date4September 2020
Why do people commit suicide? Social factors like loneliness, financial ruin and shame can be triggers https://medicalxpress.com/news/2020-05-people-commit-suicide-social-factors.html Accessed Date4September 2020